MyanLearn's Speak English Online Course အင်္ဂလိပ်စကားပြော အွန်လိုင်းသင်ခန်းစာ 2021 - Học giỏi tiếng Anh
Improve your English Speaking skill now!
You can practice your English speaking with the Bot with native English voice to improve both your listening and speaking English. And, learn thousands of new vocabs and phrases with interactive ways to help you remember easily. Try out our free Demo lessons now!
Understand the Native speakers and holdaconversation with them
Thousands of new vocabs and phrases with fun games
Learn English with context so that you will understand how to use it better.
Time : 35 hours of lessons
Price : 8500ks / 30 days
Location: Anytime Anywhere (online)
Internet: Low internet data consumption
MyanLearn Online နဲ့ အင်္ဂလိပ်စကားပြောခုပဲလေ့ကျင့်ကြပါစို့။
လုပ်ငန်းခွင်ဝင်နေသူတွေအတွက် မဖြစ်မနေ တတ်မြောက်ထားသင့်တဲ့ အခြေခံ အင်္ဂလိပ်စကားပြောနဲ့ နားထောင်ခြင်း အတတ်ပညာတွေကို MyanLearn Online app ရဲ့ “အပြန်အလှန် လေ့ကျင့်သင်ယူမှုပုံစံ” နဲ့ သင်ယူကြည့်လိုက်ပါ။ အင်္ဂလိပ်တွေရဲ့ အသံနေအသံထားအတိုင်း လိုက်ကျင့်နိုင်ပြီး ကိုယ့်အခြေအနေကို ပြန်ပြောပေးနိုင်မယ့် ကွန်ပြူတာ bot လည်း ပါဝင်ပါတယ်။
အင်္ဂလိပ်စကားပြောသင်ခန်းစာတွေကို လက်တွေ့အသုံးပြုမယ့် အခြေအနေတွေအလိုက် ရေးဆွဲထားပါတယ်။ စကားပြော သာမကပဲ ဝေါဟာရနဲ့ စကားလုံး ၁၀၀၀ ကျော် ကိုပါ လေ့ကျင့်ပေးဦးမှာပါ။ မမှတ်မိမှာလည်း မစိုးရိမ်ပါနဲ့။ ကြာာရှည်စွဲမြဲစွာ မှတ်မိနေနိုင်အောင် အထူးပြုလုပ်ဖန်တီးထားတဲ့ Interactive သင်ခန်းစာပုံစံမျိုးစုံလည်း ပါဝင်ပါတယ်။
ဒါကြောင့် အစမ်းသင်ခန်းစာတွေကို အခုပဲ အခမဲ့ လေ့ကျင့်ကြည့်လိုက်ကြရအောင်။
MyanLearn Online မှာ အင်္ဂလိပ်စကားပြော သင်ကြားရင် ရလာမယ့် အကျိုးကျေးဇူးတွေကတော့ –
2. အင်္ဂလိပ်ဒေသခံတို့၏အသံထွက်များကိုပိုမိုနားလည်လာပြီး သူတို့နှင့်စကားစမြည်ပြောလာနိုင်ခြင်း
4. အခြေအနေအချိန်အခါမျိုးစုံတွင်အသုံးပြုနိုင်သောအင်္ဂလိပ်စကားပြောသင်ခန်းစာများထည့်သွင်းထားခြင်းကြောင့် နားလည်တတ်မြောက်ရန်ပိုမိုလွယ်ကူခြင်း
5. မြန်မာနိုင်ငံသားများအတွက် ရည်ရွယ်ပြီး စီစဉ်ထားသဖြင့် နေ့စဉ်ဘဝတွင် လက်ငင်းအသုံးချနိုင်ခြင်း
Time: ၃၅ နာရီမျှကြာမြင့်သောသင်ခန်းစာများ
Price: ၈၅၀၀ ကျပ် (၃၀ ရက်)
Location: အချိန်မရွေး၊ နေရာမရွေး
#myanlearn #learnmore #myanmar #edtech #education #learnenglish #englishlearning #english
Follow MyanLearn App on Facebook here:
Follow MyanLearn Online on Facebook here:
Follow MyanLearn App on Instagram here:
Download MyanLearn App here:
Vladimir Guerrero: Speaking English withaBat
Học Nói tiếng Anh với Cô Giáo nước Ngoài | Mrs Hương |
🗣️အင်္ဂလိပ်စကားပြောပုံစံများ Level2– Part 1 😃 English Speaking Patterns in Burmese | EDULISTIC
LUYỆN NÓI TIẾNG ANH 52 – 52 MẸO THUYẾT TRÌNH HAY – Tip 09 – The Most Important Word in Speaking
English Speaking | English Bolna Sikhe | English Speaking Practice | Short English Sentences
Ngày nay, việc ăn chay không còn giới hạn ở người theo Đạo Phật mà ngày càng được nhiều người sử dụng phổ biến và dần có xu hướng lan rộng vì đem lại nhiều tác dụng tốt đến sức khỏe.. Chúng tôi tổng hợp nhiều món chay ngon và tốt cho sức khỏe tại trang Nấu món chay chẳng hạn như Cuộc đời đức phật tập 7, mon chay canh khoai so nau lac Lợi ích của việc ăn chay đúng cách sẽ giúp bạn giảm thiểu và ngăn ngừa nhiều bệnh tật. Tuy nhiên, bạn nên trao đổi với bác sĩ trước khi ăn chay để đảm bảo cung cấp đủ chất dinh dưỡng hàng ngày cho cơ thể khỏe mạnh nhé.